Indlela kuhlangana entsha abafazi - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Indlela kuhlangana entsha abafazi
Mna recommend ukuba wonke umntu kuthenga i-e-book"Abafazi"
Kwi-inxalenye yokuqala, uza ukufunda izakhelo, ongqindilili Isiseko famous entsha abafaziAbanye abantu bacinga ukuba kuyenzeka ukuba indlela abafazi ngaphandle ukwazi izakhelo, xa kwi eneneni, ke izakhelo ukuba enze umahluko, hayi okungekuko amaqhinga. Uza ukufunda malunga engundoqo iimpazamo ukuba abantu benza xa approaching abafazi, kwaye ngubani inani omnye umbandela emisela impumelelo hayi kuphela reaching ngaphandle ukuba abafazi, kodwa kanjalo bonke ootitshala budlelwane nabanye. Kwi-inxalenye yesibini, siza bathethe malunga indlela engqele, kwaye kwangoko malunga indlela ka-engaziwayo abafazi. Ndiya zichaza hayi kuphela iintlobo ezahlukileyo convergence, kodwa kanjalo njani, xa, kwaye kutheni simele kusetyenziswa, ihamba kunye ezininzi convergence phrases ukusuka apho thatha umzekelo. Okokuqala, ndiya zichaza ukuba ufuna ukuba wonke indlela imisebenzi, kutheni hayi nje ukusebenzisa ilungelo ibinzana, kukho imibandela ukuze ufumanise ukuba impumelelo okanye ukungaphumeleli le indlela ngokwayo, kwaye yintoni kufuneka kugxila ukuze uphumelele. Kowesithathu isiqingatha, sisoloko indlela i-yingqele, kodwa kweli xesha thina nokuchaza ezahlukeneyo kwiimeko ukuba ingaba kwenzeka kuwe, ngoko ke kule imeko nganye uyazi kakuhle into omawuyenze. Ngowesine inxalenye akekho malunga ukutshintsha isihloko, kodwa malunga approximation ukuba ubushushu, kwaye kwangoko malunga njani indlela abafazi ngendlela ezahlukeneyo contexts, ingakumbi kwi njani ukwakha ngokubanzi loluntu isangqa ngoko ke uyazi ukuba abantu abaninzi abathi kukwenza oku ngaphandle nkqu uzama ukuhlangabezana entsha abafazi, yiya kwi indlela yakho, unoxanduva constantly zichaziwe. Kwi-anesihlanu kwaye inxalenye yokugqibela, siza afumane i -"zinokuphathwa"indlela, uza funda indlela ukuyisebenzisa kwiimeko ezahlukeneyo, kwaye ndiya kubonisa njani ukuba banike abafazi incredible iziphumo kunye abancinane kakhulu lincinane, kwaye siya kanjalo bathethe malunga ezinye indlela ukufunda kancinane malunga specifics yabasetyhini.
Emva zonke, kwi -"Uqeqesho"isikhokelo, uzakufumana exercises ukuba uza kukunceda isantya phezulu yakho inkqubela-phambili kwaye ingaba yendalo kwaye spontaneous zinto ukuba uza ukufunda.
Xa ufuna fumana zonke ezi iindlela, kulwazi lwakho abafazi liza kunyuka significantly ukuba wafakwa amanqaku ubuncinane i-anesihlanu into ufunda. Lo ngumzekelo ezibalaseleyo guide, ingakumbi ngokomthetho isebenziseke imizekelo kwaye yoqobo-imeyili.
Oku olukhulu kuyo, ingakumbi ngokomthetho isebenziseke imizekelo, kuba isiphelo kubalulekile abo ngenene kukholelwa, kwaye ubhekiso usebenza kwi-Italian inyaniso.
Mna ukufumana isikhokelo kakhulu uzalise yoqobo-imeyili:"i-nathaniel hawthorne combines i-theoretical umba (kwalomgaqo-siseko) kwaye isebenziseke umba (akukho ngaphantsi kwalomgaqo-siseko) kakuhle kakhulu. Mininzi imizekelo ethile, kwaye ulwazi oluneenkcukacha kuba iintshukumo ngendlela ethile, kwaye countless kwiimeko, ngoko ke, mna ukufumana isikhokelo kakhulu kugqityiwe. Abanye okulungileyo iziphakamiso ukusuka incwadi unako kanjalo luncedo ukuba aahende kakhulu experienced"- imeyili yoqobo:"abasebenzisi. Ndingumntu fan ka-seduction, ukususela oldest ukuba uninzi bale mihla, ndizifundile yakho e-book amaxesha amaninzi kwaye kufuneka kuthi ukuba ngokwenene wenze kakuhle. Ubuqu, ndinako kuthi ukuba abanye okulungileyo inspirations ukusuka incwadi unako luncedo nkqu ukuya kwi-ingcaphephe seduction,"ndafumanisa umfazi ngomhla emva ufunda ileta yentsusa. Iqulathe ezininzi isebenziseke exercises, uchaza attitudes ukuba kuchaphazela abafazi, kwaye bandinceda ukuziqonda ezinye"programming"iimpazamo kwi-ego. Mna ngokukhawuleza zifunyenweyo umfazi imini emva kokuba mna ukufunda (uza kuzisa okulungileyo comment.) mah: -)","Elikhulu isixhobo nkqu abo kuba into sele uyazi","kwaye ileta yentsusa.
Omnye kwazi bani ukuba ndino okubaluleke waba, ndithi, ekubeni Jikelele-sikhokelo a real indlela, ukutsho oko, i-set of imithetho ukuze ndinga kulandela.
Ndandisazi oko kwaba njani ukuyenza, kodwa concepts njenge ixabiso unikezelo kwaye receptivity ukukopa, ngoko ke masithi theoretical isiqingatha, andiyenzanga kubazi kwaye ndiyazi nabo kwi ngokubanzi umbono oko uza kukwenza ngalo mzuzu, ukususela iziphumo ingaba iselwa ngculaza, nangona ngabo adapted ukuba iimeko apho kukho, ndicinga ukuba amancinane izixeko kukho ezinkulu kufuneka ukwenza loluntu izangqa kwaye iindlela ingaba kakhulu zinokuphathwa ngenxa yokuba yingqele kakhulu kunzima kuphunyezwe satisfactory iziphumo, ngexesha omkhulu isixeko uyakwazi ngokukhuselekileyo indlela i-yingqele.
Nangona kunjalo, i-e-book sichaza oku okanye ukuba kuzo zonke inkcukacha, ngoko ke kubaluleke ngenene elikhulu isixhobo nkqu abo sele uyazi into.
Ndizakukubona kungekudala Mna ngenene liked i-nathaniel hawthorne kungenxa yokuba uzalise yoqobo:'. Yenza ngamagqabantshintshi njani ukuba ahlangane abafazi, ngoko ke kukho enye kuphela indlela ukuba uyaya unpunished, kwaye relaxes kuwe, kokukhona ngenxa yokuba kufuneka ngakumbi iinketho, kwaye kangangokuba ungafumana ngakumbi iziphumo. Ukwikhefu, mna zilawulwe ukuhlangabezana i-Italian wasetyhini kwaye yiya umandlalo abayo (kwi isitulo). Molo marko, nge-e-book ungalufumana njani ukwazi entsha abafazi mna zilawulwe ukwandisa wam ulwazi kwi Ngezifundo, kwaye mna zilawulwe ukufumana phandle wam intuthuzelo eselunxwemeni kwaye funda okungakumbi malunga boys 'kwaye girls' amaqela. Nkqu ukwikhefu kwi-Rhodes, phakathi kwabo bonke foreigners ababekho apho, mna zilawulwe ukuhlangabezana i-Italian umfazi ukususela milancity in italy, hlala enye hotel kwaye yiya umandlalo abayo (kwi isitulo). Ndiza ndonwabe kunye incwadi, kwaye ndiza ngokuqinisekileyo unako ubuncinane shock umntu ke ubomi. Mna anayithathela zahlangana ngoko ke, abaninzi girls kwi-iintsuku ezimbalwa.
Ndafumanisa oku kuluncedo kakhulu kakhulu isebenziseke
Hayi pretty, mhlawumbi, kodwa oku Kube-L-L-d ufumana i-okuqala e-mail. Mna anayithathela zahlangana ezininzi girls kwi-iintsuku ezimbalwa. hayi nje nge beautiful nezinamandla, kodwa kunye oku Kube-L-l-l (ndeza phezulu kunye ebukeka wam izifundo, ngoko ke beautiful ukuba akukho bani waziva okanye waba ke ridiculous) Kwaye ndingathanda emphasize ukuba le ndlela yindlela YENDALO kwaye ke ngoko hayi kuphela inani ngobuchule techniques ukulandela oku, kodwa kanjalo sichaza ngendlela elula kwaye linear indlela kuziphatha njani xa approaching girls. Le yindlela elungileyo yotyalo-mali. Ngenxa iyakuvumela ukuba nathi ukuya kuhlangana girls esabelana sino zange dared ukondla wethu mna-athathe, inika kuthi uxolo lwengqondo kwaye yenza kuthi bazive ngathi abantu. Kufuneka nje isicelo ezimbalwa imigaqo enyanisweni, kwaye isiphumo siya kuba guaranteed"kwaye ileta yentsusa. Mna liked yokuba kubalulekile ngoko nangoko kulo nyaka, embalwa kuphela imithetho wafakwa ukuziqhelisa kunye ukusebenza ngu insured. Inyanga emva koko, ndandidibana yam ngoku girlfriend, ufumene umfazi ndifuna, kwaye waba dissatisfied.
Oku amazing."Akho okuqala idilesi ye-imeyili. Mna ke uninzi impressed kunye yolwazi uqeqesho. Baninzi exercises ukuba ingaba iluncedo kakhulu. Ukufumana ukwazi entsha abafazi, ngathi bonke ebooks kule uphawu, ekugqibeleni ngokuphonononga kwakho ukukhula njengoko umntu enze phezulu kuba nokungabikho nomdla kuyo ngenxa loluntu conditioning okanye nokungabikho a indoda nani. Imini emva kokuba mna waqala i-Isahluko kwi umzimba ulwimi, ndandidibana a emangalisayo kubekho inkqubela abo. 'I-Imeyili Yoqobo:'. Kakhulu aph kwaye wenze kakuhle, hayi amaxesha amaninzi crap. Ngoko ke siyavuyisana. Ngenxa yokuba ndingumntu kakhulu vula kwaye nzima-ukuya khona umntu, kodwa ndifumanise ukuba abanye iluncedo kakhulu umzimba ulwimi iincam kwaye iincam kwi njani ukuba ahlangane umfazi kwi beach kwaye kwindawo yokuqubha, ngenene enkosi, ubone wena care.
Bayibize a coincidence, kodwa imini emva kokuba mna waqala i-Isahluko kwi umzimba ulwimi, iliso uqhagamshelane, kwaye kubekho izandla wam pockets, ndandidibana a emangalisayo kubekho inkqubela.
Imibulelo Phawula:"mna ngenene liked ngayo ngoba uzalise yoqobo, i-imeyile.
Mna ngenene liked i-nathaniel hawthorne kungenxa yokuba kugqityiwe.
Yenza libanzi isixhosa njani ukuba ahlangane abafazi, ngoko ke kukho enye kuphela indlela kwaye lenza kuwe, kokukhona relaxed ngenxa yokuba kufuneka ngakumbi iinketho kwaye ungafumana ngakumbi iziphumo. Ukufumana ukwazi abantu kubaluleke kakhulu ilula kwaye yoqobo nge-imeyili apha:'. Nazi wam iziphumo:"Kunye uluvo surprise ukuba mhlawumbi awunakho qinisekisa, ndafunda ukuba ukufumana ukwazi abantu ngu extraordinarily kulula - njani fun kubalulekile ukuba joke jikelele nge-girls abantliziyo amagama kuwe barely nokwazi (enyulu imbono ukwenza kuni laugh) - abantu ingaba ngenene ezindaweni njengoko ixesha elide njengoko unombono guts ukwamkela bonke izimemo ukuba kuphuma - a passion xa alahle amaqela apho mna hardly nokwazi nabani na, ingakumbi ngaphesheya apho ndiya kuphila.'.
უფასო ვიდეო სტატისტიკა წყვილები, სექსი, უფასო ვიდეო სტატისტიკა
ividiyo incoko Dating dating ngaphandle ubhaliso i-intanethi Dating ngaphandle ividiyo lonely ufuna ukuya kuhlangana nawe dating site ividiyo Dating abafazi Dating site kuba ezinzima ividiyo incoko lonyaka ividiyo incoko ngaphandle ukusayina phezulu kwaye free girls ividiyo incoko kuphila